अब्बल सामुदायिक विद्यालयकाे यात्रा: नारायणी नमुना मा. वि.काे सफलताको कथा
भीम भारती २५ भाद्र ।
'म मेरा बिद्यार्थीलाई कहिल्यै पढाउँदिन, उनीहरुलाई आँफैले सिक्ने वातारण मात्र बनाइदिन्छु' -अल्बर्ट आइस्टाईन
नमुना बन्दै गरेको काठमाडैंको तिलिङटार माद्यामिक बिद्यालयको एउटा समुह देशमा नमुना उपलिब्ध प्राप्त गरेर ख्याति कमाएका अरु बिध्यालयहरुको अबलोकन भ्रमण गर्नलाई निस्कियो । बिद्यालयले ३ दिनको लागि रिजर्भ गरेको गाडीमा प्रधानाध्यापक,बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीका अध्यक्ष, शिक्षक अभिभाबक संघ अध्यक्ष, बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीका सदस्यहरु सहित शिक्षक तथा कर्मचारीहरु गरेर ३७ जनाको समुह आफुले काम गरिरहेको सस्था (बिद्यालय)लाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, खास के गरेर केही बिद्यालय देशकै नमुना र उत्कृष्ट कसरी बने ? हामीले त्यहाँ पुग्न अथवा भनौ हामीले ती बिद्यालयहरुसँग प्रतिस्प्रधा गर्न के के गर्नु पर्ने रहेछ ? आदि जिज्ञासाका साथ यात्रामा निस्किएको थियो ।
सरकारी बिद्यालय जसलाई सामुदायिक स्कुल पनि भनिन्छ । खासगरी भन्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालयहरुको बिकासमा नेपालका हरेक सरकारहरु उदासिन नै देखिएका छन् । तर आफ्नै प्रयासमा केही सामुदायिक बिद्यालयहरु उत्कृष्ट बनेका छन । एउटा सामुदायिक बिद्यालयले आफुभन्दा राम्रो गरेका अरु सामुदायिक बिद्यालयलाई हेरेर र देखेर सिक्नु वा एकले अर्कालाई हेरेर आगामी यात्रामा पाइला चाल्नु एउटा प्रगितशील सोचाइ पनि हो । तिलिङटार आफु पनि कमजोर स्कुल होइन । यसले शिक्षाको ब्यापार गरेर अथाह पैसा कुम्ल्याइरहेका शैक्षिक माफियाहरुले सन्चालन गरेका कथित निजी स्कुलहरुको अगाडी उनीहरुले भन्दा गतिलो परिणाम दिएर,राम्रा र गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देखाइरहेको छ । यो यात्रा अझ राम्रो बन्ने प्रयास मध्यको एउटा फरक पाइला हो ।
राजामार्गमा गाडी गुडिरहेको छ । भित्र गाडीमा सवार यात्रुहरुबिच गीतको आन्ताक्षरी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । महिला शिक्षक र पुरुष शिक्षकबिच, बिषयगत शिक्षक-शिक्षक बिच, शिक्षक र बि ब्य स अभिभाबक संघबिच चरण-चरणमा आन्ताक्षरी चलिरह्यो मध्य दिनसम्म । यात्राभित्र गरिने यस्ता अरु नैतिक कृयाकलापले मानिसहरुलाई एकापसमा घुलमिल हुन पनि त सहयोग गर्छ ।
यात्रा बिभिन्न स्कुलहरुसम्म पुग्यो ।
नारायणी नमुना माद्यामिक बिद्यालय -साच्चिकै नमुना
हाम्रो गाडी नारायणगढ पुग्यो । नारायणी नमुना मा बि को गेटमै हामीलाई स्वागत गर्न प्रधानाध्यापक श्री पूर्ण प्रसाद दवाडी सर आउनुभयो,उहाको साथमा सहायक प्रधानाध्यापक बासुदेब शर्मा पनि । बिद्यालय प्राङ्गण पुग्ने बित्तिकै नारायणी नमुना मा बि मा उसको स्वर्ण स्तम्भ हाँसिरहेको रहेछ । बिद्यालयको भौतिक अबलोकनपछि पूर्णसरले हामीलाई सभा हलमा लिनु भयो । जहाँ चितवन जिल्लाकै अग्रणी शैक्षिक ब्यक्तित्व सो बिद्यालयको ब्यबस्थापन समितीलाई लगातार ४ कार्यकाल नेत्रित्व प्रदान गरिरहनु भएका श्री टेक बहादुर थापा हामीलाई स्वागत गर्न पर्खिरहनु भएको थियो ।
पूर्ण सरले टेक सरलाई अगाडी राखेर आफ्नो बिद्यालयले शुरुदेखी गरेको संघर्ष र प्राप्त गरेको सफलताका प्रेरणात्मक कथाहरु हामीलाई सुनाउन थाल्नुभयो । २०२० सालमा रात्रि बिद्यालयको रुपमा स्थापना भएको नारायणी बिद्यालय बिहानी हुँदै दिउँसोसम्म पढाई संचालन भयो । २०३८ सालमा एस एल सीमा सामेल भएको सो स्कुल पहिलो वर्ष नै सो परीक्षामा निल भयो । त्यसताका अरु बिद्यालयका फेल भएकाहरु आएर पढ्ने थलोको रुपमा नारायणी थियो । त्यसताका नारायणीलाई निल स्कुल अनि त्यहा पढाउने शिक्षकहरुलाई उनीहरुको नामको अगाडी निल जोडेर समेत बोलाउन थालियो ।
बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था र उपलब्धिबाट हैरान भएका चिन्तित एकजना शिक्षक टेक बहादुर थापा २०४९ सालमा प्रधानाध्यापक भईसकेपछि शैक्षिक सुधारको लागि पाइला चाल्न थाल्नुभयो । आफु प्र अ भएकै वर्ष उहाँले बिद्यालयमा अतिरिक्त कक्षाहरु सन्चालन गर्न थाल्नुभयो । अर्को वर्षदेखि उहाँले सो बिद्यालयमा भर्ना हुनाको लागि प्रबेश परीक्षा दिनुपर्ने ब्यबस्था गर्नुभयो । तेस्रो वर्षमा उहाँले पहिलो परीक्षा पास गरेपछि मात्र दोस्रो परीक्षामा सामेल हुन पाइने अनि दोस्रो परीक्षा पास गरेपछि मात्रै अन्तिम परीक्षामा सामेल हुन पाइने नियम र ब्यबस्था गर्नुभयो । अर्को वर्षदेखी उहाँले सो बिद्यालयमा पास अंक ४० कायम गर्नुभयो ।
तत्कालिन प्र अ टेक बहादुर थापाको सही नेत्रित्व र बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि ठीक समयमा लिईएका ठीक निर्णय र पहलकदमीको परिणाम आज नारायणी नमुना मा बि नाममा मात्रै नमुना होइन कि काममा समेत साच्चिकै नमुना भईसकेको छ । गतवर्षको एस ई ई परीक्षामा सो बिद्यालयबाट ७१ जनाले ए प्लस श्रेणीमा पास गरेर सो कुरा प्रमाणित गरेका छन । २०६८ सालमा मध्यमाञ्चलमा आठौ भएको बिद्यालय २०६९मा राष्ट्रिय रुपमा पाचौ स्थानमा आयो । २०७१ सालमा देशको २१औ स्थानमा पुगेको नारायणी २०७२ मा देशको दोस्रो र मध्यमान्चलमा पहिलो भयो । २०७३ सालमा ३ नम्बर प्रदेशमा पहिलो र देसभरिमा दोस्रो स्थानमा पुगेको बिद्यालयमा ३० जना दृष्टिबिहिन बिद्यार्थी बिद्यालयको होस्टलमै बसेर पढिरहेका छन । यो कुरा हामीलाई सुनाउँदा पूर्ण सर गर्बिलो बन्नु भएको थियो । कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान र ब्यबस्थापन बिषयको पढाई भईरहेको र एकदमै राम्रो परीणाम निकालिरहेको बिद्यालयमा Diploma in Civil Engineering को समेत पढाई भईरहेको छ ।
नारायणीले शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेको छ । देशमा काम लाग्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । यी कुराहरु उसका देखिने कुरा हुन,सबले देख्न सक्छ । बिद्यार्थीको सर्वाङ्गिण बिकासमा यसले खेलेको भूमिकाको पनि उत्तिकै महत्व छ । जिल्ला स्तरमा सन्चालन हुने राष्ट्रपति रनिङशिल्डमा सो बिद्यालयले सहभागिता जनाएको खेलमा अरु बिद्यालयहरु खेल्नै डराउँछन । नारायणीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताहरुमा अरु बिद्यालयले ठाउँ समेत छाडिदिन्छन ।
आखिर कसरी नारायणी बिद्यालय नमुना भयो र अनि यो सफलता प्राप्तिसम्म आइपुग्यो त ! हेरौ यसले अहिले पनि जारी राखेका केही अभ्यासहरु
नारायणीमा जारी केही नमुना अभ्यासहरु-
१) कक्षा ८ र १० मा हरेक शुक्रबार परीक्षा हुन्छ
२) कक्षा १० को बिद्यार्थीले बिद्यालयमा १० वटा एस् ई ई अभ्यास पछि मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने एस् ई ई परिक्षामा सामेल हुन जान्छन् ।
३) हरेक परीक्षापछि विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका घरमै लिएर जान्छन् अनी उनीहरुले आफ्ना अभिभाबकसँग बसेर आफ्ना सफलता र कमजोरी बारे छलफल गर्छन् ।
४) कक्षा मनिटरले लकबूक गर्छ । शिक्षकको हरेक गतिबिधि विद्यार्थीले निगरानी गर्छन् ।
५) बिद्यालयमा प्रअको शैक्षिक प्रसासनिक र ब्यबस्थापकिय एजेण्डा हुबहु लागु हुन्छ ।
६) बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीमा सबैको सहमति हुन्छ सदस्यहरुले बिद्यालयलाई चाहिएको समय दिनुहुन्छ ।
७) शिक्षकहरुमा एकता छ ।
८) निजी स्तरमा राखिएका शिक्षकहरुलाई पनि सरकारी सरह तलब भत्ता र सुबिधाको ब्यबथा छ ।
९) अतिरिक्त कक्षा सन्चालन गरेबापत शिक्षकलाई भत्ताको ब्यबस्था छ ।
१०) बिद्यार्थी तथा स्कुलको भलाइको लागि बिद्यालयले अभिभाकबाट न्युनतम शैक्षिक सुधार चन्दा लिन्छ ।
देशको चर्चित नदी नारायणीको किनारमा अबस्थित नारायणी नमुना मा बिले शैक्षिक आन्दोलनका अग्रणी ब्यक्तित्वहरु समेत उत्पादन गरेको छ । हाल यसका प्र अ पूर्ण प्रसाद दवाडी शिक्षक महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने बि ब्य स अध्यक्ष टेक बहादुर थापा राष्ट्रिय अभिभाबक संघका केन्द्रिय सदस्य साथै चितवन जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । गत शैक्षिक सत्रको मुल्याङ्कनको आधारमा चितवन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लामा महत्वपूर्ण शैक्षिक योगदान गरेका ब्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्दा यही बिद्यालयका ३१ जना शिक्षकहरु पर्नुबाट 'शिक्षकहरु भबिस्यका महापुरुषहरु निर्माण गर्ने कालिगढहरु हुन' भन्ने भनाइ यही बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई देखेर भनिएको हो कि जस्तो पनी लाग्छ । नत्र निजी तथा ब्यापारिक शिक्षाको बिगबिगी रहेको हाम्रो देशमा नारायाणीमा प्रबेश परिक्षा फेल भएपछि र त्यसमा भर्ना हुन योग्यता नपुगेपछि मात्र अरु ब्यापारिक निजी बिद्यालयहरुमा अभिभाबक तथा बिध्यार्थी जानुपर्ने अवस्था त्यतिकै त सिर्जना गरेका छैनन होला ती शिक्षकहरुले !
शिक्षा मार्गनिर्देश हो,व्यबहार परिवर्तनको सुचक हो,श्रमसँग जोडने मुख्य कडी हो साथै समाजको बिक्रिती तथा बिसंगतिका बिरुद्द सही बिचार र भाबनाबाट सुसजित हुने प्रमुख साधन होू भन्ने भाव सब विद्यार्थीहरुमा जगाउने लक्ष लिएको नारायणी नमुना मा बि लाई आफ्नो यात्रामा सफल होस् शुभकामना !!